China Isityalo se-Cryogenic medium size ulwelo oksijini isityalo Ulwelo nitrogen Izityalo abavelisi kunye nabathengisi | OKANYE
Umatshini weoksijini wePSA
Isityalo seNSA seNitrogen
Ukwahlulwa komoya kweCryogenic Oxygen Plant
Ukwahlulwa komoya kweCryogenic yokuNitrogen
Izixhobo zokwahlula umoya
Inyaniso yeOxygen neNitrogen ...
Igesi Medical Oxygen Plant fo ...
Ulwelo Nitrogen isityalo Liqui ...
Ioksijini yeLwelo kunye neNitrogen ...
Uhlobo Cryogenic efficie eliphezulu ...
Isityalo seCryogenic medium size ulwelo lweoksijini kwisityalo seLitrogen seNitrogen
Icandelo lokwahlula-hlula komoya libhekisa kwizixhobo ezifumana ioksijini, initrogen kunye neargon ukusuka kulwelo olungumoya kubushushu obuphantsi ngokwahluka kwento nganye ebilayo.
Ukufakwa kwe-1 ngokulula kunye nokubonga ngokugcina kuyilo lweemodyuli kunye nolwakhiwo.
Inkqubo ye-2.Fully automated yokusebenza elula nethembekileyo.
3.Ukufumaneka okuqinisekisiweyo kweegesi zorhwebo ezisulungekileyo.
I-4 iqinisekisiwe ngokufumaneka kwemveliso kwinqanaba lolwelo ukuba ligcinwe ukuze lisetyenziswe ngalo lonke ixesha lolondolozo.
Ukusetyenziswa kwamandla 5.Low.
Ukuhanjiswa kwexesha 6.
Ioksijini, initrogen, iargon kunye nenye igesi enqabileyo eveliswa yiyunithi yokwahlula umoya isetyenziswa kakhulu ngentsimbi, imichiza
Umzi mveliso, ukucoca, iglasi, irabha, elektroniki, ukhathalelo lwempilo, ukutya, isinyithi, ukuveliswa kwamandla kunye namanye amashishini.
Umgaqo woyilo wale sityalo usekwe kwiindawo ezahlukeneyo zokubila zerhasi nganye esemoyeni. Umoya ucinezelwe, upholile kwaye ususwe i-H2O kunye ne-CO2, emva koko uza kupholiswa kwindawo yokuhambisa ubushushu iphambili de ibe iyanyibilika. Emva kokulungiswa, imveliso yeoksijini kunye nenitrogen inokuqokelelwa.
Esi sityalo senzelwe ukucocwa komoya kwe-MS ngokwandisa inkqubo ye-turbine expander. Isityalo esiqhelekileyo sokwahlula umoya, esisebenzisa izinto ezizalisiweyo kunye nokulungiswa kokwenza iargon.
Umoya okrwada uya kwisihluzi somoya ukuze ususe uthuli kunye nokungahlambuluki koomatshini kwaye ungene kwisiguquli somoya apho umoya ucinezelweyo ukuya kwi-0.59MPaA. Emva koko iya kwinkqubo yokupholisa umoya, apho umoya upholile ukuya kwi-17 ℃. Emva koko, ihamba iye kwi-2 ye-molecular sieve adsorbing tank, eqhubayo, ukuze isuswe i-H2O, i-CO2 kunye ne-C2H2.
Emva kokuhlanjululwa, ukuxubana komoya nokwandisa umoya ohlaziyiweyo. Emva koko icinezelwe ngoxinzelelo lwecompressor ukuba yahlulwe ibe yimilambo emibini. Inxalenye enye iya kwindawo enkulu yokufudumeza ubushushu ukuba ipholise ukuya kwi-260K, kwaye ifunxwe ukusuka embindini wesitshisi esikhulu sokufudumeza ukungena kwi-turbine yokwandisa. Umoya owandisiweyo ubuyela kwindawo yokutshintsha ubushushu ukuze iphinde ihlaziyeke, emva koko, iyaqukuqela inyusa umoya isiguquli. Elinye icandelo lomoya liyonyuswa kukunyuka okuphezulu kweqondo lobushushu, emva kokupholisa, kuye kuye kubushushu obuphantsi obonyusa i-expander. Emva koko iya kwibhokisi ebandayo ukuze ipholile iye kwi ~ 170K. Inxalenye yayo isenokuphola, kwaye iqukuqele emazantsi kwikholamu esezantsi ngokutshintsha kobushushu. Kwaye omnye umoya utsalwa ukuhendwa okuphantsi. gxotha. Emva kokwandiswa, yahlulwe yangamacandelo ama-2. Inxalenye enye iya ezantsi kwikholamu esezantsi yokulungiswa, okuseleyo kubuyela kwindawo yokufudumeza ubushushu, emva koko iqukuqele emva kokuvuselelwa.
Emva kohlengahlengiso oluphambili kwikholamu esezantsi, umoya olulwelo kunye nenitrojeni emsulwa yolwelo inokuqokelelwa kwikholamu esezantsi. Inkunkuma engamanzi enitrojeni, umoya olulwelo kunye nenitrojeni emsulwa engaxutywanga engena kwikholam ephezulu ngokusebenzisa ulwelo lomoya kunye nokupholisa initrogen engamanzi. Iyalungiswa kwakhona kwikholam ephezulu kwakhona, emva koko, ioksijini engamanzi engama-99.6% yokusulungeka inokuqokelelwa ezantsi kwikholamu ephezulu, kwaye ikhutshwe ngaphandle kwebhokisi ebandayo njengemveliso.
Icandelo leqhezu le-argon kwikholamu ephezulu lifunxwe kwikholamu ye-argon engekho mthethweni. Kukho iinxalenye ezi-2 zekholamu yeArgon ekrwada. I-Reflux yenxalenye yesibini ihanjiswa ngaphezulu kweyokuqala ngepompo engamanzi njenge-Reflux. Iyalungiswa kwikholamu ye-argon engafunekiyo ukufumana i-98.5% Ar. 2ppm O2 argon ekrwada. Emva koko iziswa embindini wekholamu ye-argon emsulwa nge-evaporator. Emva kokulungiswa kwikholamu ecocekileyo ye-argon, (99.999% Ar) ulwelo lweargon lunokuqokelelwa emazantsi ekholamu emsulwa yeargon.
Inkunkuma yenitrojeni ukusuka phezulu kwikholamu ephezulu ukuphuma kwebhokisi ebandayo ukucoca njengomoya ohlaziya, ukuphumla kuya kupholisa inqaba.
I-nitrojeni ephezulu kwikholam encedisayo yekholamu ephezulu iphuma ngaphandle kwebhokisi ebandayo njengemveliso ngeyona nto ipholileyo kunye nomtshisi wobushushu ophambili. Ukuba akukho mfuneko ye-nitrogen, inokuhanjiswa kwi-tower tower tower. Ukuze amandla abandayo enqaba yokupholisa amanzi ayonelanga, kufuneka kufakelwe chiller.
1: Isiguquli somoya (ipiston okanye ioyile-yasimahla)
2: Iyunithi yefriji yomoya
Inkqubo zokuhlanjululwa 3.Air
4: Itanki yomoya
6: Isixhobo sokucoca isihlunu seMolekyuli
7: isixhobo sokucoca ulwelo
8: Ikholamu yohlengahlengiso
9: Ukunyusa turbo-expander
10: Isiphumo sohlalutyo lokucoceka kweoksijini
Egqithileyo Umenzi onetyala nge-oksijini-yeoksijini-ye-nitrogen-yeargon-yemveliso-yesityalo
Okulandelayo: Isityalo seCryogenic oksijini sibiza indleko yesityalo seoksijini
Ngokuzenzekelayo iNitrogen Argon Oxygen Generating Machine Plant
Umenzi Ucoceko High nitrogen Equipment PS ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) Inkqubo yokucoceka komoya I-ORN-5A 5 0.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 I-ORN-30A 30 5.3 KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 40 7 KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 ...
Umgangatho ophezulu wePSA isityalo seoksijini siyathengiswa sishushu ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Iphepha kunye nePulp mveliso yeOxy bleaching kunye ulungelelwaniso 2: iiglasi zemizi mveliso yesithando somlilo ...
Umatshini wokuvelisa i-nitrojeni we-PSA kwimizi mveliso ...
I-LNG yezityalo zeNitrogen Generator Equipment ...
I-petroleum gas edibeneyo (i-APG), okanye irhasi enxulumene nayo, luhlobo lwerhasi yendalo efumaneka kwiidipozithi zepetroleum, nokuba inyibilike kwioyile okanye "njengekepusi yegesi" yasimahla ngaphezulu kweoyile. Irhasi inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi emva kokuqhubekeka: kuthengisiwe kwaye kubandakanywa kuthungelwano lokuhambisa igesi yendalo, esetyenziselwa ukuveliswa kombane kwindawo kunye neinjini okanye iiturbines, ...
Unyango lwe-Oxygen Generator
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Senza isityalo se-PSA sisebenzisa i-PSA yamva nje ( Uxinzelelo lwe-Swing Adsorption) kwitekhnoloji. Ukuba ngumntu ...
Uhlobo cryogenic isikali mini ukwahlulwa komoya ...
Izinto eziluncedo zeMveliso Inkampani yethu iyazibandakanya nomenzi kunye nomthengisi wezityalo zokwahlulwa komoya ze-cryogenic, isityalo se-PSA ioksijini / initrojeni, itanki yolwelo oluphezulu lwe-cryogenic kunye netanki kunye nemichiza. Ixhotyiswe ngezixhobo ezahlukeneyo kunye noomatshini zizonke iiseti ezingama-230, ezinje ngezixhobo zokunyusa ezinkulu, amanzi aphantsi kwamanzi ...
No.88 zhaixi indlela empuma jiangnan idolophu hangzhou isixeko zhejiang China
Ihlokondiba / WhatsApp / WeChat: +86 18758037220